Isidima sobuqu kunye nokuzibandakanya koMoya akunakuze kuhlangane. Inye kwezi zimbini kufuneka inyamalale; ayikho indawo yabo bobabini.
Mawoo, yeha, ukuba bonke abantu banelungelo lokufumana uAlaya, babe babini kunye noMphefumlo oMninzi, kwaye ukuba, banayo, uAlaya mababafumane kancinci!
Khangela indlela efana nenyanga, ebonakaliswa kumaza okuthula, i-Alaya ibonakaliswa yincinci kwaye inkulu, iboniswe kwiiatom ezincinci, kodwa isilela ukufikelela entliziyweni yabo bonke. Yeha ke ukuba bambalwa abaza kufumana imali ngesipho, umvuzo ongenakuthelekiswa nanto wokufunda inyaniso, umbono ofanelekileyo wezinto ezikhoyo, ukwazi kwabangabikhoyo!
Vol. 1 JUNI, 1905. 9
NJENGOKO igama lisitsho, "into" yile nto isisiseko okanye ime phantsi. Into ephantsi, okanye emi phantsi, yindalo ebonakalayo.
Igama, "mulaprakriti," njengoko lasetyenziswa ngama-Aryan amandulo, ichaza eyayo intsingiselo ngokugqibeleleyo nangakumbi kunombhalo. "Mula" Iingcambu, "Prakriti" indalo okanye umbandela. I-Mulaprakriti ke, ukuba imvelaphi okanye ingcambu evela kwindalo okanye imicimbi evela kuyo. Kungoko ke sisebenzisa eli gama.
Ukuzonwabisa yinto engapheliyo kwaye iyinto eyodwa. Ngumthombo nemvelaphi yayo yonke imbonakalo. Ukusetyenziswa kweziyobisi kunokuba nakho ukuzazisa, kwaye ngokwazi, ukwazi. Ukusetyenziswa komzimba akukho nto, kodwa ingcambu evela kuwo. Ukuxhomekeka akusoloko kubonakaliswa kwiimvakalelo, kuba iimvakalelo azikwazi ukuyibona. Kodwa ngokucamngca ngayo ingqondo inokudlula ikwimo yesimo kwaye uyiqonde apho. Yintoni eqondwa ziimvakalelo ayisiyonto, kodwa ulwahlulo olusezantsi lokuhamba ukusuka kwinto, kudibaniso lwabo olwahlukeneyo.
Ngalo lonke ixesha ulwazi lwento kuhlala ikho. Ingqondo ekhoyo kwinto yesiqhelo kukuzihambisa. Ukushukuma okwenziwayo kungunobangela wokubonakaliswa kwento ngokusebenzisa ezinye izenzi. Iziyobisi zihlala zifana, njengesixhobo, kodwa ziguqulelwa ngokuhamba jikelele kwinto yomoya. Izinto zokomoya zi-atomic. Into yoMoya sisiqalo sendalo iphela, yehlabathi, kunye nabantu. Ngenxa yentsebenzo yomoya-into ethile iguqulelwa kumabakala athile okanye kwiimeko ezithile. Into enye iba zimbini, kwaye obu bume buba khona ngexesha lonke lokubonakaliswa. Ukusuka kwokomoya kakhulu ukuya kwezona zixhobo zingaphezulu kwe-arc esezantsi yomjikelezo, emva koko ubuyela ekujikelezeni kwehlabathi.
Umcimbi womoya wenza ezi zinto zimbini zichaseneyo, okanye izibonda, ezikhoyo kuyo yonke imbonakalo. Ukususa kwayo kokuqala kwizinto zomoya-ubonakala njengomoya. Ukukhupha kwayo isixhenxe ngaphandle okanye ezantsi kungumbandela wethu omkhulu. Umba yile nto yesixhobo, eshukumiweyo, ebunjiweyo, emile ngokomfanekiso wayo ekuthiwa yomoya. Umoya yinto yento leyo ehamba, amandla, kunye neemilo ezizezinye izibonda ngokwazo ezibizwa ngokuba zizinto.
Kwindlela yayo yangaphandle okanye esezantsi yento ebisiyinto yokwenyani, kodwa ngoku iyinto yesibini yomoya, iyachukunyiswa, kwaye inikwe umkhombandlela, impembelelo kunye nolwazelelo, ukusuka kwizikumkani ezisezantsi ukuya emntwini, ngokushukuma okwenziwe. Ukuba into yomoya ilungelelaniswe ngokulingeneyo iyazichaza ngokuba inentshukumo yokuzihambisa, elona lizwi liphezulu lezinto eziqinisekileyo, nokungafi, okukhulu, kwaye kungaphezulu. Ukuba, nangona kunjalo, ingqondo okanye intshukumo yohlalutyo iyasilela ekulinganiseni kwaye ichongiwe ngokuzimela, iphindaphindeka kwakhona ngamaxesha ahlala ehleli engafunekiyo kunye nokuvela.
Umzimba ngamnye okanye uhlobo luhlobo lwesithuthi kulo mgaqo ungasentla, kwaye lo nto iyakutshintsha umgaqo-siseko wokwazisa emzimbeni okanye kwifom engezantsi kwayo. Uphuhliso lokomoya lubandakanya ukuguqulwa komcimbi ukusuka kumazantsi ukuya kwinqanaba eliphezulu; Isambatho ngasinye siyinqwelo yokubonakalisa okanye ukubonakalisa ukwazi. Imfihlelo yokufumana izinto azakhi kwaye inamathele kwimizimba okanye kwiifom, kodwa kukuxabisa isithuthi njengesixhobo sokufumana into yokugqibela yomzamo.
Ukuziva ngengqondo akufani nganto kwisiphongo sodongwe kunokusindisa umhlaba. Ingqondo ayinakutshintsha, kuba ayitshintshi. Kodwa isithuthi esibonakalalisiwe ngaphakathi sinokutshintsha. Ke loo nto kwimeko yayo yomzimba kunye nefom ayinakuba nakho ukubonisa kwaye ichaze ukwazi njengoko kuya kuba yinto ye-Buddha okanye ka-Kristu.
Iidaliwe ziyahamba njengemihla yexesha elingenamda, ukuze loo nto isebenze ngokukhawuleza ukusuka kwelona lizwe lilula kwaye elingaphuhliswanga ukuya kwelona nqanaba liphezulu lobukrelekrele: ukusuka kumhlaba wentlabathi okanye kwisidalo sendalo, ukuya kwingelosi enkulu okanye kwindalo iphela uBuntu obungenagama. Eyona njongo yokutshintsha kwezinto njengemeko yomoya ibe yimo, kunye nokuvela kwezinto ezinento yokwenza nomoya yile: ukufunyanwa kokuqonda.